Uwe elu Polo, Hoodies na Jaketị, Ekike egwuregwu - Lebang
Jaketị na ajị anụ
Nanchang Lebang Garment Co., Ltd. nke dị na Nanchang Jiangxi, China, bụ ọkachamara na -emepụta akwa akwa, ọkachamara na imewe, imepụta na ire ahịa uwe ụmụaka/ ụmụaka na ndị okenye, gụnyere uwe egwuregwu, jaket & uwe, hoodie & sweatshirt, vest & vest elu, T-uwe elu & uwe elu Polo wdg.
Mee ka ndị ahịa nwee ahụ iru ala na ngwaahịa ha na -eji
Lekwasị anya na ire akwa akwa dị mma
Ndị Mmebe Nwoke, Ndị Ebipụtara & Ekebere eke
N'ogbe ndị ikom ejiji larịị pullover hoodies omenala ikom l ...
Nanchang Lebang Garment Co., Ltd., nke dị na Nanchang Jiangxi, China, bụ ọkachamara na -emepụta akwa akwa, ọkachamara na imewe, imepụta na ire ahịa uwe ụmụaka/ ụmụaka na ndị okenye, gụnyere uwe egwuregwu, jaket & uwe, hoodie & sweatshirt, vest. & elu, T-uwe elu & uwe elu Polo wdg. N'iji ala nke 8000 square mita na ndị ọrụ 280 na ụlọ ọrụ ya, Nanchang Lebanong Garment Co., Ltd na-etinye usoro njikwa mma gburugburu ma na-emepụta ngwaahịa uwe kacha mma maka ihe dị ka iberibe 300,000 kwa Isi ahịa anyị dị na America, Europe, South America, ahịa South Africa. N'inwe ahụmịhe na mmepe ihe karịrị afọ 10, anyị enwetala nnukwu Nanchang Lebang Garment Co., Ltd., nke dị na Nanchang Jiangxi, China, bụ ọkachamara na -emepụta akwa akwa, ọkachamara na imewe, n'ichepụta na ịzụ ahịa uwe ụmụaka/ ụmụaka na ndị okenye, gụnyere akwa egwuregwu, jaket & uwe, hoodie & sweatshirt, vest & n'elu, T-shirt & uwe elu Polo wdg. Na nha ala 8000 square na ndị ọrụ 280 na ụlọ ọrụ ya, Nanchang Lebanong Garment Co., Ltd na-etinye njikwa mma gburugburu. Sistemu ma na -emepụta ngwaahịa akwa kacha mma maka ihe dị ka iberibe 300,000 kwa ọnwa.Onye isi ahịa anyị dị na America, Europe, South America, ahịa South Africa. Site na ahụmịhe na mmepe ihe karịrị afọ 10, anyị enwetala nnukwu ihe ịga nke ọma, ka ọ dị ugbu a anyị enwetara aha ọma n'aka ndị ahịa anyị niile nke ụwa. Mmezu, Nanchang Lebang Garment Co., Ltd., nke dị na Nanchang Jiangxi, China, bụ ọkachamara na -emepụta akwa akwa, ọkachamara na imewe, imepụta na ire uwe ụmụaka/ ụmụaka na ndị okenye, gụnyere uwe egwuregwu, jaket & uwe, hoodie & sweatshirt. , vest & top, T-shirt & Polo shirt etc. N'iji ala nke 8000 square mita na ndị ọrụ 280 na ụlọ ọrụ ya, Nanchang Lebanong Garment Co., Ltd na-etinye usoro njikwa ịdị mma niile ma na-emepụta ngwaahịa uwe kacha mma maka ihe dịka 300,000. Isi ahịa anyị dị na America, Europe, South America, ahịa South Africa. Site na ahụmịhe na mmepe ihe karịrị afọ 10, anyị enwetala nnukwu ihe ịga nke ọma, ka ọ dị ugbu a anyị enwetara aha ọma n'aka ndị ahịa anyị niile nke ụwa. ka ọ dị ugbu a anyị enwetala aha ọma n'aka ndị ahịa anyị n'ụwa niile.
T-shirt, ma ọ bụ uwe elu tee, bụ ụdị akwa akwa akpọrọ aha T na ahụ ya na aka ya. Na omenala, ọ nwere aka uwe dị mkpụmkpụ na eriri olu gburugburu, nke a maara dị ka olu ndị ọrụ, nke na -enweghị olu. A na-ejikarị T-shirts eme ihe na-agbatị agbatị, dị mfe ma dịkwa ọnụ ala, ọ dịkwa mfe nhicha ....
Na ngwụsị narị afọ nke 19, ihe omume dị n'èzí ghọrọ ihe dị mkpa maka klaasị ndị ọchịchị Britain. Jodhpur ogologo ọkpa na uwe elu polo ghọrọ akụkụ nke wodrobu maka egwuregwu ndị metụtara ịnyịnya. Ndị Britain weghachitere India abụọ uwe, yana egwuregwu polo. Uwe elu polo mbụ ...